Internet Ministries - Rubatsiro Rwenjodzi Mission
Kubatsira kweNhamo Njodzi inopa zvokudya zvisingabhadhari, midziyo miduku / zvinhu zvekicheni nevadzidzi vanozvipira kubatsira nekuchenesa kune vanotambura vemarudzi ose ematambudziko epachivande - mafashamo, mhepo, matutu, moto, kudengenyeka kwenyika, etc. Tine Mutungamiri wePrereach anoshanda neizvi basa rekugadzidza zvidzidzo zveBhaibheri munzvimbo dzatiri kubatsira. Tichibatsirwa nemachechi emunharaunda munzvimbo dzakakanganiswa, isu tinokwanisa kushanda sevanhu vakawanda ve4,000 zuva nezuva nekicheni yedu yekufambisa.
Tinoedza kugoverana rudo uye kunzwisisa kwaJesu navo. Tinoda kuti vazive kuti Mwari ane hanya uye tinoitawo. Nokuda kwemabasa evanozvipira mubasa iri rekumusha kwemamishinari, mazana ezvidzidzo zvebhaibheri zvakaitwa uye isu tinoziva nezvevanhu vakawanda vakabhabhatidzwa munaKristu. Chinonyanya kukosha, isu vanozvipira tiripo kuti tibatsire kereke yemo.
Mike Baumgartner, Mutungamiri / CEO